Sida Loogu Wareejiyo Maktabada Lugood Computer Kale | Wararka IPhone
Haddii aad tahay muusikada jecel waa macquul in aad leedahay a maktabad multimedia si fiican ayey u amreen fanaaniinta, diiwaanka, taariikhaha, iwm. Laakiin ka waran haddii aan qaabeyno kumbuyuutarka ama aan rabno inaan maktabaddayada oo dhan u wareejino kombiyuutar kale? Waxay noqon kartaa riyo cabsi leh in laga bilaabo meel hoose.
Xumaanyo waaweyn, dawooyin waaweyn. iTunes waxay noo ogolaaneysaa inaan maktabada ugu wareejino wixii Windows ama Mac kombiyuutar ah oo leh talaabooyin fudud oo fudud, si maktabaddeenu marwalba ay noola socoto oo marwalba loo cusbooneysiiyo loona habeeyo si qumman. Tilmaamaha soo socda ayaan ku bari doonaa sida loogu wareejiyo maktabadayada iTunes oo dhan kumbuyuutar kale.
1 Sida loogu wareejiyo maktabadda iTunes kombuyuutar kale
1.1 Kumbuyuutarkeenii hore
1.2 Kumbuyuutarkayaga cusub
Sida loogu wareejiyo maktabadda iTunes kombuyuutar kale
Casharrada soo socda ayaa loo sameeyay kumbuyuutarrada Mac, laakiin nidaamku waa la mid yahay kumbuyuutarrada Windows. Farqiga u dhexeeyaa waa tillaabada ugu dambeysa, Windows wuxuu leeyahay waddo u gaar ah oo ka duwan waddada Mac.
Waxaan fureynaa Raadiyaha oo waxaan galnaa galka Muusikada. Waxaan arki doonaa galka la yiraahdo iTunes.
Waxaan nuqul ka qaadanaa galka iTunes on USB ah ama drive dibadda adag. Waxay tagaysaa iyada oo aan la sheegin in awoodda USB-ga ama diskiga banaanka ay tahay inuu ka weynaado cabbirka maktabaddeenna.
Waxaan si fudud ku sameyn doonnaa qaab ka soo horjeedka ah ee aan ku sameynay kombuyutarkii hore.
Waxaan ku xireynaa diskkeena banaanka ah ama USB-ga kumbuyuutarka cusub.
Waxaan dul marnaa galka uu ku jiro galka iTunes waxaan ka helnay kombuyuutarkeenii hore.
Waxaan nuqul ka qaadanaa galka iTunes gudaha galka Muusiga.
Waana taas. Waxaan sameeyaa hawshan markasta oo aan sameeyo rakibid nadiif ah oo ah OS X. Waxa kaliya ee lagaa doonayaa waa inaad yeelato dulqaad yar oo kuxiran cabirka maktabaddaada (kiiskeyga waa boqolaal gigabyte). Markii hore iyo ciyaartoy kale, waxay ahayd inaan dib u habeeyo maktabaddayda oo dhan markasta oo aan u wareejinayo kombuyuutar kale, laakiin iTunes waxay ii oggolaaneysaa tallaabooyinkan fudud si aan u helo maktabad marwalba la cusbooneysiiyo.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Alaabada Apple » iTunes » Sida Loogu Wareejiyo Maktabada Lugood Computer kale
Ka waran hadaan maktabada itunes ku hayo disk banaanka ah isla sidii hore ma u shaqeeyaan? Telefoonnada iphone, iwm ma la iswaafajin karaa?
Jawaab Diego Rodríguez-Vila
Haa, Xaqiiqdii, waxaan haystaa laba maktabadood, mid HD iyo mid (oo leh aflaam) oo ku socda gaadhigayga dibadda. Waxa ugu xun ayaa ah in lala tashado cajalad gooni ah, waxay dareemeysaa xoogaa gaabis ah (mid caadi ah: wuxuu bilaabmaa rogid, iwm). Waxa ay tahay inaad sameyso markaasi waa inaad ku bilowdo iTunes furaha ALT oo la riixay (Waxaan ka hadlayaa Mac, waxaan u maleynayaa in Windows-ka ay tahay SHIFT) oo xulo maktabadda aan rabno.
Podcasts-ka sidoo kale ma la taageeraa?
habkani miyuu sidoo kale badbaadinayaa "xiddigaha" iyo tirinta ciyaarta?
Ku jawaab carlitos 254
Ma hubo 100%, laakiin waxaan dhihi lahaa haa. Mid ka mid ah heesaha aan aadka u maqlay waxay ahayd maxaa yeelay waxaan ku seexday iyada oo loop loo yaqaan (xD) aadna uma aanan maqlin banaanka waqtigaas. Ku dhowaad 300 jeer ee aan tiriyey waxaan dhihi lahaa waxay ka yimaadeen markaa waxaanan rakibay Yosemite OS X 0.
Waxaan hayaa aruurinta CD-ga qayb gaar ah oo diskiga adag ah. Markii aan dib u cusbooneysiiyo daaqadaha OS waa inaan mar labaad diwaan galiyaa dhamaan saxamada. Ma nuqulan kareynin log ama wax la mid ah oo markale maktabadda waad xareyn kartaa.
Jawaab Pedro Arenal
Habeen wanaagsan Waan ka xumahay, laakiin waligay iTunes kuma isticmaalin Windows. On Mac waxaan ku furaa iTunes oo leh furaha ALT oo la riixay waxayna ii ogolaaneysaa inaan doorto maktabada aan doonayo. Isku day isla wax ka mid ah Windows-ka oo leh furaha SHIFT (Ma ogi inay kuu oggolaanayso inaad doorato maktabad).
CarPlay macruufka ama sida loo helo CarPlay dhammaan baabuurta
5 barnaamij oo aan lagu waayi karin iPhone-kaaga xagaagan 2015